Gabaabsiga Biyaha Webiga Nile iyo Muranka Mandaqadda Geeska | Berberanews.com
Home WARARKA Gabaabsiga Biyaha Webiga Nile iyo Muranka Mandaqadda Geeska
Gabaabsiga Biyaha Webiga Nile iyo Muranka Mandaqadda Geeska
Wabiga waxa uu ka dhashaa roobabka ka da’a deegaanada uu kasoo qulqulo, balse dhawaanahan roobabkii aad ayay u yaraadeen, sidaasi darteedna wabigii waa uu biyo yareeyay.
Mararka ay roobabka aadka u da’aan waxaa la socda dabeylo iyo duufaano, kuwaasi oo dhulka Itoobiya ka dhaqa maadada bacriminta ciidda, taas oo waxyeelo weyn ay kala kulmaan beeralayda Itoobiya.
Marka la’isku daro dadka degan dalalka uu maro wabigan waxa ay wadartu gaaraysaa illaa 500 milyan qof marka la gaaro sanadka 2050-ka, waxaana ugu wacan kororka dadka, waxayna taas mustaqbalka ka dhigaysaa mid mugdi ah.
Walwal xooggan ayaa ka muuqda wajiyada saraakiisha wasaaraddadaha ku teedsan wabiga kuwaas daaqadaha kasoo eegaya qulqulka biyaha wabiga, indhahooda hortooda ayayna wax kasta ka dhacayaan “Niilka wax kasta ayuu noo yahay anaga, waa waxa aan cabno, islamarkaasna cunno, waa masiibo weyn haddii ay wax ku dhacaan biyahan” ayuu yiri Cali Naqiifi oo ka tirsan wasaaradda waraabka iyo maareynta biyaha Masar.
“Markii hore wabiga waan caabudi jirnay, balse hadda ma doonayno wax isaga ku saabsan, waxaanan rabnaa in aan ka fogaano in kasta oo suurtogal ah” ayuu yiri Khamees Khala oo ka mid ah kalluumaysata wabiga Niilka.
Previous articleMadaxweyne Silaanyo oo safarku tegay Berbera, Mashaariic uu dhagaxdhigay iyo kormeer uu ku soo mara Goobo-Daawo
Next article“Difaaca dalkaaga waa muqadas” Madaxweynaha Somalia